Sanduuqa kaydinta bamboo-dabiiciga ah ee ugu fiican waxay ku kaydin kartaa alaabta miiska iyo alaabta kale ee wax soo saarka iyo warshadaha | Bambo dheer
Sanduuqa kaydinta bamboo-dabiiciga ah wuxuu kaydin karaa alaabta miiska iyo alaabta kale
1. Ujeedo badan: Qabanqaabiyaha khaanadahan waxa loo isticmaali karaa in lagu kaydiyo alaabta yaryar sida alaabta miiska, dahabka, waraaqaha iyo qalabka. Waxaa loo isticmaali karaa jikada, qolka fadhiga, qolka jiifka iyo qolka tamarta iwm. Waxay ku habboon tahay codsiga noocyo badan oo alaab ah marar badan.
2. Qabanqaabiyaha jaranjarada la fidin karo oo la hagaajin karo: Rakaabkayada goynta ayaa leh naqshad la isku hagaajin karo oo leh 3 ilaa 5 qaybood. Laba qaybood oo la ballaadhin karo ayaa kaa caawin kara habaynta dhammaan qalabkaaga wax lagu gooyo, qalabka wax lagu gooyo iyo alaabta lacagta ah. Qeybta dhexe ee la ballaariyay ayaa kaa caawin doonta kaydinta alaabta waaweyn.
3. Habka kaydinta wax ku ool ah oo qumman: Qabanqaabiyaha bamboo wuxuu ku kaydin karaa walxaha yaryar ee wasakhaysan qaybaha. Way fududahay in la qaado alaabta oo la ilaaliyo wakhtiga raadinta alaabta sida malqacadaha iyo mindiyaha, qalimaan iyo mastaradaha, silsiladaha iyo saacadaha.
4. Qaab dhismeed adag iyo hawlo si fudud loo dayactiri karo: Qalabka jikada ee nooca khaanadaha ah waa mid adag in lagu kaydiyo meel habboon. Waxaa intaa dheer, kaliya waxay qaadanaysaa 5 daqiiqo in lagu nadiifiyo oo lagu dayactiro saxaaradda goynta. Si degdeg ah ugu tirtir sanduuqa kaydinta bamboo biyo diirran, ka dibna si fudud ugu tirtir maro qoyan.
5. Sanduuqa kaydinta khaanadaha waxa uu ka samaysan yahay 100% bamboo, waara oo aan biyuhu lahayn, wuxuuna u adkeysan karaa sanadaha la isticmaalo.
Cabbirka Kartoonka 570*365*140mm
Taariikhda keenista Ku celi dalabka 45 maalmood, dalab cusub 60 maalmood
Miisaanka guud Qiyaastii 1.5kg
Logo Alaabooyinka waxa loo keeni karaa calaamada calaamada macmiilka
Qolka jiifka, waxaad ku kaydin kartaa silsiladaha, jijimooyinka, hilqado, biinanka timaha iyo dahabka kale. Jikada dhexdeeda, waxaad ku kaydin kartaa mindiyaha, fargeetada, malqacadaha iyo alaabta kale ee miiska. Xafiiska dhexdiisa, waxa aad ku kaydin kartaa qalimaan, cajalado, mastaradaha, staplers, iyo ulaha xabagta. Waxa loo isticmaali karaa in lagu kaydiyo agabka qalabka, sida wrenches, screwdrivers, mindiyaha utility, iwm.
Kala duwanaanta codsiga ballaaran, cabbirka la hagaajin karo, oo ku habboon khaanadaha kala duwan.
Hore: Sanduuqa bamboo-jikada ee lagu kaydiyo mindida fargeetada qaadda iyo alaabta miiska
Xiga: Qabanqaabiyeyaasha Drawer Bamboo Qabanqaabiyaha Qalabaynta Jikada oo leh 5 Qaybood
Sanduuqa kaydinta bamboo leh dabool iyo gacan
Sanduuqa Hay'adda Kaydinta Miiska Bamboo ee...
Kaydinta Bamboo Stackable (Bamboo Dabiici ah)
Sanduuqa Xafiiska Qabanqaabiyaha Kaydinta Bamboo Dabiiciga ah
Bamboo Iibin Kulul oo Tayo Sare leh
Qabanqaabiyaha Kaydinta Bamboo Desktop Shelf